Ilaalinta Summadaada iyo Sumcaddaada Suuqgeynta Iimaylka oo leh Shahaadooyinka Calaamadaha La Xaqiijiyay (VMCs) | Martech Zone
Ilaalinta Summadaada iyo Sumcaddaada Suuqgeynta Iimaylka oo leh Shahaadooyinka Calaamadaha La Xaqiijiyay (VMCs)
Isniintii, September 20, 2021 Isniintii, September 20, 2021 Mark Packham
Suuqgeeyayaasha emailku waxay fahmaan in ololaha guuleysta uu ku saabsan yahay wax ka badan gaarsiinta iyo farriinta. Waxay ku saabsan tahay ka -qaybgalka rajooyinka iyo abuuritaanka xiriir ay kobcin karaan waqti ka dib. Asal ahaan, dhisidda xiriirku wuxuu ka bilaabmaa sumcadda iyo aaminaadda sumadda:
Badi (87%) ee macaamiisha adduunka ayaa sheegaya inay tixgeliyaan sumcadda shirkad markay iibsanayaan alaab ama adeeg.
Sida Sumcadda iyo Kalsoonidu u Saamayso Go'aannada Iibsashada iyo Karti -gelinta Suuqgeynta
Laakiin ku -haynta sumcadda sumcadda adduunka internetka ma aha mid sahlan, gaar ahaan marka maanta muuqaalka hanjabaadda amniga internetka uu si dhakhso ah isu beddelayo. Weerarada phishing, spam, iyo hanjabaadaha kale ayaa sii kordhaya, iyo jilayaasha xun ayaa noqda kuwo aad u dagaal badan iyagoo adeegsanaya aagag u eg:
22% xadgudubyada ayaa ku lug lahaa injineernimada bulshada - 96% kuwaas oo ku yimid emayl.
2020 Jebinta Xogta Verizon
In kasta oo hanjabaadyadan is -beddelaya, emaylku wuxuu sii wadaa inuu door muhiim ah ka ciyaaro suuqgeynta, gaar ahaan ka dib masiibada adduunka:
80% suuq -geeyayaashu waxay xuseen kororka ka -qaybgalka emaylka 12 -kii bilood ee la soo dhaafay.
Dhibaatooyinka ayaa aad u sarreeya, hanjabaadaha emaylku kaliya ma gelin karaan macaamiisha dhammaadka ah halis laakiin waxay si weyn u wiiqi karaan kalsoonida sumcadaha shirkadaha - gaar ahaan haddii weerar la adeegsanayo aag khiyaano dhab ahaantii guuleysto.
Wadajir, VMCs, BIMI, iyo DMARC waxay kor u qaadaan Email Trust
Si looga caawiyo meheradaha inay ka ilaaliyaan sumcaddooda jawiga halista firfircoon ee maanta, koox shaqeysa oo email iyo hoggaamiyeyaal isgaarsiineed ayaa soo saaray Tilmaamayaasha Calaamadaha Aqoonsiga Fariinta (BIMI). Heerka emaylka ee soo baxaya ayaa wada shaqeeya Shahaadooyinka Calaamadaha La Xaqiijiyay (VMCs) si loogu oggolaado shirkadaha inay ku muujiyaan astaamahooda gudaha macaamiisha emaylka ee la taageero. Sida sumadda calaamadda buluugga ah ee Twitter -ka, astaanta lagu muujiyey VMC waxay siinaysaa qofka qaata kalsooni ah in emaylka la xaqiijiyay.
Si aad ugu qalanto adeegsiga VMC, ururradu waa inay sidoo kale fuliyaan Xaqiijinta Farriinta Domain-ku-saleysan, Warbixinta & Is-waafajinta (DMARC). DMARC waa siyaasad xaqiijin emayl iyo borotokool warbixineed oo loogu talagalay inay gacan ka geysato sidii looga ilaalin lahaa ururada in goobahooda loo adeegsado weerarada sida kufsiga, kufsiga, iyo adeegsiga kale ee aan la oggolayn. Macaamiisha iimaylka ayaa u adeegsada inay xaqiijiyaan in iimaylku runtii ka yimid domainka la cayimay. DMARC waxay sidoo kale siisaa ururrada aragti la hagaajiyay farriimaha laga soo diro dalkooda, taas oo kordhin karta amniga emaylkooda gudaha.
Adigoo adeegsanaya VMC -yada ay hubisay DMARC, suuqyadu waxay tusaan macaamiisha in ururkoodu diiradda saarayo qaadista tallaabo si loo hubiyo asturnaanta macaamilka, iyo sidoo kale amniga emaylka oo xoog badan. Tani waxay diraysaa farriin xoog leh oo ku saabsan sida ay uga go'an tahay sumcadooda iyo sumcaddooda.
Iftiimin Iftiimin Ku Saabsan Calaamadaha Ka Qaybgalka
Markaad ku muujiso astaanta hay'ad si sax ah sanduuqa qaataha, VMCs iyo BIMI kaliya ma soo bandhigaan tilmaame aaminaad muuqaal ah laakiin waxay kaloo bixiyaan hab cusub oo ka caawin kara shirkadaha inay si buuxda uga faa'iideystaan ​​sinnaanta ku urursan sumaddooda, maalgelin yar. Adigoo u saamaxaya macaamiisha inay ku arkaan sanduuqa sanduuqooda astaan ​​caan ah ka hor inta aysan xitaa furin emaylka, suuqyadu waxay helaan fursad ay ku gooyaan buuqa sanduuqa sanduuqa ee buuxsan oo ay kaga tagaan aragtiyo summad badan. Logos waa calaamado awood leh oo la macaamilaya macaamiisha waxayna gacan ka geystaan ​​hubinta is -dhexgal joogto ah oo togan. Natiijooyinka hore ee Yahoo Mail tijaabooyinka BIMI iyada oo boqolaal ka -qaybgalayaashu ay ballan -qaadayeen, iyo email la xaqiijiyey ayaa la muujiyey si kor loogu qaado ka -qaybgalka qiyaastii 10 boqolkiiba.
VMC-yada sidoo kale waa kuwo kharash-ku-ool ah oo qaali ah maxaa yeelay waxay ku dhisan yihiin kanaalka emaylka oo ay hay'aduhu hore u maalgashadeen una horumariyeen sannado badan.
VMCs waxay u baahan yihiin Iskaashi IT ah
Si looga faa'iidaysto VMC -yada, suuq -geeyayaashu waxay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan waaxyadooda IT si loo hubiyo in ururkoodu u hoggaansamo heerarka fulinta DMARC.
Tallaabada ugu horreysa waa in la dejiyo Qaab -dhismeedka Siyaasadda Sender (SPF), kaas oo loogu talagalay inuu ka hortago cinwaannada IP -ga ee aan la oggoleyn inay u soo diraan emaylkaaga. Kooxda IT -ga iyo suuqgeynta ayaa sidoo kale u baahan doona inay dejiyaan Boostada Aqoonsiga DomainKeys (DKIM), oo ah halbeeg xaqiijinta iimaylka oo adeegsada furaha sirta ah ee dadweynaha/gaarka ah si looga hortago faragelinta farriinta marka ay ku safrayaan.
Ka dib markay tillaabooyinkani dhammaadaan, kooxuhu waxay dejiyaan DMARC si ay ula socdaan taraafikada emaylka, u soo saaraan warbixinno, una siiyaan muuqaalka farriimaha laga soo diro domainka.
Aasaasidda fulinta DMARC waxay qaadan kartaa maalmo ama toddobaadyo, iyadoo ku xiran baaxadda shirkadda. Si kastaba ha ahaatee, waxay aakhirka ka caawisaa ururada inay xoojiyaan amniga dadka isticmaala, iska ilaaliyaan tiro badan oo weerarrada phishing ah, oo ay u qalmaan ururka shahaadada VMC. Noocyo kala duwan Blogs iyo ilo kale oo onlayn ah ayaa diyaar u ah inay ka caawiyaan ururrada inay noqdaan DMARC-diyaar.
Maaddaama shahaadooyinka VMC ay si aad ah u aqbaleen suuq -geeyayaasha iimaylka, waxay u badan tahay in macaamiisha iyo rajooyinka ay dhowaan ka filan doonaan summad la yaqaan sanduuqyada emaylkooda. Shirkadaha qaada talaabooyin ay ku bilaabayaan qorshaynta VMC -ga iyo DMARC -ga maanta waxay isu meelayn doonaan inay ka soocaan dadka badan waxayna u xaqiijin doonaan dhagaystayaashooda inay mudnaanta kowaad siiyeen amniga. Iyagoo isku xiraya kalsoonida dhammaan isgaarsiinta emaylkooda, waxay sii wadi doonaan inay xoojiyaan sumcadooda iyo sumcaddooda xitaa waqtiyada isbeddelaya.
Soo dejiso Digicert's VMC Marketing Guide
Tags: BIMIdigicertDMRCXaqiijinta Farriinta Domain-ku-saleysanxaqiijinta emaylkaastaanta emaylkakalsoonida iimaylkaastaanta sanduuqaphishingqaab siyaasaddeedka dirahaCiidanka Booliiska Soomaaliyeedshahaadooyinka suuqgeynta la xaqiijiyayvmcvmc shahaadooyinka
Mark Packham Monday, September 20, 2021 Monday, September 20, 2021
Mark Packham wuxuu ku biiray DigiCert bishii Luulyo 2016 wuxuuna kormeeraa istiraatiijiyadda astaanta, hogaaminta gen, hoggaanka fikirka, istiraatiijiyadda nuxurka, xiriirka dadweynaha, suuqgeynta dhijitaalka ah, iyo xiriirka falanqeeyaha. Wuxuu keenayaa waayo -aragnimo ka badan 20 sano oo ah suuq -geyn istiraatiiji ah iyo maareeyaha sumadda adduunka, isagoo hoggaaminayey ka -qaybgal suuqgeyn caalami ah oo lala yeesho shirkadaha sida Salesforce.com, Microsoft, Verizon, iyo Abbott.
10 Xeer Oo Ku Saabsan Sida Looga Jawaabo Dib U Eegista Diidmada Ah Ee Online -ka
Sida Loo Bilaabo Ololaha Saxiixa Saxiixa Iimaylka Oo Guulaystay (ESM)